टाउकाको अपरेशन गर्दा लाइन गएपछि हालत खरब!!! – News Nepali Dainik
टाउकाको अपरेशन गर्दा लाइन गएपछि हालत खरब!!!
प्रकाशित मिति: बिहिबार, फाल्गुण ०६, २०७७ समय: २१:३२:४५
डाक्टरहरुले तत्कालै मोवाइल फोनको टर्च प्रयोग गर्ने निर्णय गरे। पछि डाक्टरहरुले यसको भिडियो सामाजिक संजालमा जारी गरेका छन् । डाक्टरहरुलाई उद्धृत गर्दै डेलीमेलले लेखेको समाचार अनुसार ३४ वर्षका ती बिरामीको अपरेशन सफल भएको छ । स्वास्थ्य अधिकारी अर्तुरो जुनिगाका अनुसार अस्पतालको लाइन जानेबित्तकै जेनेरेटरको अटोमेटिक सिस्टम सुरु हुनुपर्नेमा प्राविधिक कारणवश त्यस्तो नभएपछि यस्तो समस्या आएको थियो ।
Last Updated on: February 18th, 2021 at 9:32 pm